Battery not the issue with dreamliners
Airline safety inspectors have found no faults with the battery used on Boeing's 787 Dreamliner.
Archeologists discoveredawooden box full of medicine ina2000 year-old sunken ship off the coast of Tuscany.
दृष्टिबिहीनहरुलाई कृतिम आँखा
बिज्ञान र प्रबिधिले यसरी फड्को मरिराखेको छ कि अहिले चस्मा लगाउनेहरुको लागि दृष्टि सुधार्ने लेजर अपरेसन (lasrik eye operation) प्रबिधि त काठमांडौको तिलगंगा आँखा अस्पतालमा सुरु भईसकेको हो।
Iran says it has successfully sentamonkey into space. The primate travelled inaPishgam rocket, which reached an altitude of some 120km (75 miles) forasub-orbital flight before returning its shipment intact.
1:07 PM News
२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका मोबाइलमा तीन महिनादेखि नयाँ सीआरवीटी -कलर रिङ ब्याक टोन) अपलोड हुन बन्द भएको छ । नेपाली गीत संगीतको एकमात्र बाँच्ने आधार बनेको सीआरवीटी बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको संगीत उद्योगमा परेको छ ।
एल्बम बिक्री बन्दप्रायः अवस्थामा रहेको नेपाली संगीत बजारमा अहिले नयाँ गीत संगीत निस्कने भनेकै सीआरवीटीबाट
दुई चार पैसा आम्दानी होला भन्ने आशमा हो । तर, नेपालको सीआरवीटी बजारको करिव ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको नेपाल टेलिकमा तीन महिनायता कुनै पनि नयाँ गीत अपलोड हुन सकेको छैन् ।
1:02 PM IT, News
सन् २०१३ अब केही दिन बाँकी छ । यो वर्ष गुगलमा छाएको ट्रेन्ड्सको बारेमा चर्चा हुन सुरु भएको छ । २०१३ मा सबैभन्दा बढी प्रचलित सर्च रिजल्ट्सलाई समेटेर गुगुलले हालै एक रिपोर्ट जारी गरेको छ । यो वर्ष नेल्सन मन्डेला, रोयल बेबी र टेक्नोलोजी प्रोडक्ट विश्वमा सबैभन्दा बढी खोजी भएको छ ।
गुगुलमा दक्षिण अफ्रिकाका दिवंगत राष्ट्रपति एवं रंगभेदविरुद्धको आन्दोलनका नायक मन्डेला सबैभन्दा बढी खोजी भएको छ । उहाँको डिसेम्बर ५ मा ९५ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो ।
अमेरिकाको गोप्य सूचनाहरु सार्वजनिक गर्ने एडवर्ड स्नोडेन समाचारहरुमा निकै छाए । अमेरिकाले आफ्ना मित्र देशका शीर्ष नेताहरुको टेलिफोन जासूसी गरेको खुलासापछि विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देशका लागि स्नोडेन ठूलो टाउको दुखाइको विषय बने । तर, उनको बारेमा जान्न मानिसहरुले निकै कम चाहेको देखिएको छ । स्नोडेन गुगुलको टप टेन शर्चमा छैनन् ।
गुगुलको सर्चमा बेलायतको रोयल बेबी सातौं नम्बरमा छन् । शाही परिवारको जन्ममा बेलायतमा उत्सवैजस्तो देखिने गरी खुसी मनाइएको थियो । इन्टरनेट र सोसल मिडियामा मानिसहरुले रोयल बेबीको तस्वीर निकै शेयर गरेका थिए ।
गुगलको सर्वाधिक सर्च सूचीमा थुप्रै चर्चित घटनाहरु पनि गायब छन् । सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका हलिउड हभिनेता पह वाकर गुगुल सर्चको दोस्रो स्थानमा छ । उत्तर कोरिया दशौं स्थानमा छ । आफ्नो विवादास्पद कार्यक्रम र देशको दोस्रो शक्तिशाली नेतालाई फाँसी दिइएका कारण कोरियाबारे जान्न धेरै उत्सुक भएको हुनसक्छ ।
गुगुलको टप टेन शर्चमा प्रविधिको राम्रो उपस्थिति छ । एप्पलको आइफोन फाइभ एसबारे मानिसहरु निकै खोजेका छन् । टप टेन सर्चको सूचीमा यो तेस्रो स्थानमा छ । सामसुङको ग्यालेक्सी एस ४ आठौं र सोनीको प्ले स्टेशन नबौं स्थानमा छ ।
1:52 PM Article, Facts
कपाल फुल्नु उमेर छिप्पिएको लक्षण हो । यद्यपि विभिन्न कारणले गर्दा सानै उमेरमा पनि कपाल फुल्नसक्छ । बुढेशकालमा कपाल फुल्नु सामान्य हो । तर तन्नेरी अवस्थामै कपाल फुल्यो भने नजाति हुन्छ । त्यसैले मेहेन्दी लगाएर भएपनि कपाललाई कालो बनाउने प्रयास गर्छन् कपाल फुलेका तन्नेरीहरु । तर अब फुलेको कपाललाई अस्थायी रुपमा रंग दलेर कालो बनाउने झण्झट हट्ने भएको छ । वैज्ञानिकहरुले फुलेको कपाललाई कालो बनाउने अर्थात् कपाल फुल्नै नदिने उपचारको विधि पत्ता लगाएका छन् ।
युरोपेली शोधकर्ताहरुका अनुसार उमेर बढेसँगै मानिसको कपालको हेयर फोलिकल्समा हाइड्रोजन पेरोअक्साइड रसायन जम्मा हुन्छ । जसका कारण कपालको कालो रंग हराउँछ र फुलेर सेतो हुन्छ ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार यसरी जमेको हाइड्रोजन पेरोअक्साइडलाई हटाउन र यस्तो रसायन कपालको कोषिकामा जम्मा हुनै नदिन विशेष उपचार गर्नुपर्छ । कपाल फुल्न नदिने सम्बन्धि शोधको नतिजा एफएएसइबी जर्नलमा छापिएको छ ।
अन्तरीक्षमा पठाइयो मुसा र छेपारो
2:29 AM New, Space
रुसले झण्डै एक सयवटा मुसा तथा छेपारो लगायतका जिवजन्तुलाई अन्तरीक्षमा पठाएको छ । रुसी अन्तरीक्ष संस्था रसकसमसका अनुसार शुक्रबार सय भन्दा बढि जिउँदा ‘मुसा अन्तरीक्षयात्री’ सहितका जिवजन्तु हालेर एक अन्तरीक्ष यान प्रक्षेपण गरिएको छ ।
कजाकस्तानको बैकोनुर स्पेस सेन्टरबाट रुसी समय अनुसार दिउसो २ बजे सोयुज २.१ ए नामक यान प्रक्षेपण गरिएको हो । यानमा यात्रीका रुपमा मुसा, छेपारो, शंखेकिरा सँगै विभिन्न खालका ब्याक्टेरिया, वनस्पती तथा बिउबिजन समेत पठाइएको छ ।
रोचक कुरा त के भने अन्तरीक्षयान प्रक्षेपण गर्नु अघि पठाउन लागिएको एउटा मुसा अर्को मुसाको आक्रमणमा परी मृत्यु भएपछि फेरी अर्को मुसा थप्नुपरेको थियो ।
स्मरण रहोस् यसरी अन्तरीक्षमा विभिन्न खाले साना जनावर पठाइएको यो सन् २००७ यताको पहिलो हो । त्यतिबेला यस्तै जिवजन्तु सहितको यानले अन्तरीक्षमा १२ दिन बिताएको थियो । यो रुसी यान आउँदो मे १८ मा पृथ्वीमा फर्किनेछ । अन्तरीक्षमा रहँदा यो यानभित्र लगिएका जनावरमा विभिन्न खाले ७० प्रकारका परीक्षण गरिनेछ ।
2:12 AM News, Technology
Anders Lundblad, KTH researcher and founder of MyFC, says that the device can be powered by fresh or seawater. The water need not be completely clean.
A 15-year old innovates the simplest, cheapest and probably the most effective diagnostic test for pancreatic and other cancers. School ...
सर्बौच्च शिखर रहेको देशको नागरिक भनेर हामीले धेरै गौरब गर्ने गर्छौँ। तर यथार्थमा हामी मध्य धेरै अहिले सम्म सगरमाथा गएको नी हुँदैनौ। तपाई...